Liverpool oo guul muhiim ah kaga gaartay Anfield kooxda PSG kulankooda ugu horeeyay Group C ee tartanka Champions League. – Gool FM
CR Shariif September 18, 2018
(Champ’ League) 18 Sab 2018. Kooxaha Liverpool ayaa guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Paris Saint Germain kulankooda ugu horeeya Group C tartanka ee tartanka Champions League, kadib ciyaar ku soo dhamaatay 3-2.
Kooxaha Liverpool iyo Paris Saint Germain ayaa waxay kulankooda ugu horeeya Group C tartanka ee tartanka Champions League waxay kaga bilaawday si cajiib ah, kadib markii ay labada kooxood sameeyeen fursado cajiib ah.
Kooxda ku ciyaareesay garoonkeeda Anfield ee Liverpool ayaa la timid isla qeybtii hore ciyarta goolka daah furka waxaana daqiiqadii 33-aad ka dhaliyay Daniel Sturridge, waxaana ka caawiyay Andrew Robertson, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0.
Mar kale Liverpool ayaa la timid goolkeeda labaad ee ciyaarta daqiiqadii 36-aad, waxaana rigoodhe ay heleen gool ka dhigay James Milner ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 2-0.
Ku dhawaad dhamaadka qeybtii hore ee ciyaarta gaar ahaan daqiiqadii 40-aad PSG ayaa dhalisay gool waxaana u dhaliyay Thomas Meunier ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 2-1.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayay kooxaha Liverpool iyo Paris Saint Germain ku kala nesteen 2-1.
Dib leysigu soo laabtay qeybta labaad labada kooxood ayaa waxay halkooda ka bilaabeen kubado weerar ah, xamaasada ciyaarta ayaana noqotay mid aad u xoogan.
Paris Saint Germain ayaa si weyn ugu dhibtootay in ay keensato goolkeeda barbaraha balse ugu dambeyn daqiiqadii 83-aad ayaa shabaqa Liverpool gaaray Kylian Mbappe, kaasoo ciyaarta ka dhigay barbaro 2-2.
Laakiin Liverpool ayaa markale la timid goolka guusha daqiiqadii 90-aad waxaana ka dhaliyay Roberto Firmino oo ciyaarta kusoo galay qaab badal ah wuxuuna ciyaarta ku soo gaba gabeeyay 3-2 ay guusha ku raacday Liverpool.
Maxamed Saalax oo bixiyay Fal celin YAAB ku noqotay Taageerayaasha halkii uu u dabaal degi lahaa goolkii uu Firmino guusha ugu gacan galiyay Liverpool!! DAAWO